လိုခငျြမိတဲ့စိတျ - Owl Myanmar News
ဒီနေ့ အိမျမှာ ဘယျသူမှ မရှိလို့ သဇငျတယောကျတညျး လှတျလပျနသေညျ ။ စာကွညျ့စားပှဲက ကှနျပြူတာမှာ Facebookကို ဝငျရငျး အကောငျ့အတုက သူငယျခငျြးတှေ တငျထားတဲ့ ပုံတှေ စာတှကွေောငျ့ စိတျတှေ ထကွှလာရပွီး အော စာတှကေို ဖတျခငျြလာမိတာကွောငျ့ အရငျက သူငယျခငျြးတယောကျကောငျးမှုကွောငျ့ ရောကျသှားဖူးတဲ့ အတှေးပငျလယျပွာ ဖိုရမျကို သှားဝငျဖတျလိုကျသညျ ။ အဲဒီမှာ ——- ဆိုတဲ့ အပွာ ဇာတျလမျးတပုဒျကို ဖတျရငျး ဖတျရငျးနဲ့ စိတျဝငျစားလာပွီး ဆကျတိုကျ ဖတျလိုကျမိသညျ ။ စိတျကွှဖှယျရာ အရေးအသားတှကွေောငျ့ သဇငျ အိမျနရေငျး ဝတျထားတဲ့ ဂါဝနျအောကျစကို တဖွညျးဖွညျးခငျြး မ,တငျလိုကျရငျး ပေါငျကွားက ရှကွေုတျကို ပှတျနမေိသညျ ။ လကျခြောငျးတှကေလညျး ရှကွေုတျအကှဲကွောငျး တလြောကျကို ဖိကာဖိကာ ပှတျနမေိသညျ ။ အရညျတှကေ အရမျးကို ရှဲစိုနသေညျ ။ တခါတခါ ဒီစိတျတှေ ဖွဈလာရငျ မနတေတျ မထိုငျတတျအောငျ ယားလှနျးပွီး ယောကျြား တယောကျရဲ့ ကာမဆကျဆံပေးတာကို အရမျး လိုခငျြမိရသညျ ။ … သဇငျ နှာဘူးစိတျတှထေ ရာဂမီးတှေ ဖိစီးပွီး ဖီးလျတှတေကျနတောပါကလာ­း ။… ဒီလို တှေးရငျးတှေးရငျးနဲ့ အစလေ့ေး တစဈစဈ ယားလာသညျ ။ … အာတှခွေောကျလာပွီး ရငျဘကျထဲမှာ ပူကွှကွှနဲ့ ဗလောငျဆူလာသညျ။… နောကျပွီး တငျးထောငျထလာတဲ့ နို့သီးခေါငျးလေးနဲ့ အကငြ်္ီသား ပှတျတိုကျမိတာကို ရှရှလေး ခံစားမိလာသညျ ။… ဒါနဲ့ပဲ လကျတဖကျကို မသိမသာ အောကျလြှောရငျး­ ဆီးစပျကို အုပျကိုငျကွညျ့လိုကျေ­တာ့ အားးးး . . . တကိုယျလုံးအကွောတှေ ဖွနျးဖွနျးထသှားသညျ ။
မရတော့ဘူး မရတော့ဘူး . . . အိပျယာထကျမှာ အားမလို အားမရနဲ့ ကိုယျလုံးကွီး တှနျ့လိမျလာသညျ ။ … တခုခုကို ဖဈြညှဈဆုပျကိုငျခငြ­ျလာသလိုလို ပွီးတော့ ပေါငျတံကွီးတှကေို မသိမသာ ထောငျလာပွီး ကားခညျြ စုခညျြ ဖွဈလာသညျ ။… တဆကျထဲ ဝတျထားတဲ့ ဂါဝနျအောကျစကို တဖွညျးဖွညျးခငျြး မ,တငျလိုကျရငျး ပေါငျခွံကွားက ညီမလေးကို လကေောငျးလသေနျ့လေး ရှုခှငျ့ပေးလိုကျသညျ။… နှာစေးတော့မှာ အသအေခြာပဲ ခဈခဈ ။… အောကျခံ စကျစပိုငျနာ ခြှတျခလြိုကျသညျမုိ့ အောကျပိုငျးက ဟောငျးလောငျးကွီး ဖွဈသှားပွီ ။… ခှေးလှယားသီးပုံပျေါ တကျထိုငျမိသလိုပဲတျော­့ ဂှကွားထဲမှာ ရှစိယားကြိ တကျနတောမြား ပေါငျးအတှငျးသားတှတေေ­ာငျ တဆတျဆတျတုနျတယျ ။ … အယားဖွမှေ ဖွဈတော့မယျ ။… မဟုတျရငျ ကာမစိတျအတကျလှနျလို့ အင်ျဂါဇာတျကွားကနေ အသကျထှကျသှားရငျ လူ ကွားမကောငျးလဘေူး ဟယျ။ … လကျဖမိုးနဲ့ အဖုတျကို ခှကျခှကျလေးအုပျကိုငျ­လိုကျတော့ ကှကျတိပဲ ။
အကှဲမွှောငျးတငျးတငျး­လေးကို စုနျခညျြဆနျခညျြလေး ပှတျကစားလိုကျရငျး ရငျထဲမယျ ဟာတာတာနဲ့ တောငျ့တလာပွနျသညျ ။… ဒါနဲ့ပဲ လကျညှိုးထိပျလေးတှကေို­ ပှငျ့လှာနှဈခပျြကွား­ အတငျးတိုးပွီး ဆငျးခိုငျးလိုကျတော့ အစဖေူ့းလေးကိ­ု ပှတျဆှဲသလို ဖိတိုကျမိသှားတာမို့ မှေးညှငျးတှထေောငျလွာ­ပီး တကိုယျလုံး သိမျ့သိမျ့တုနျသှားသလ­ိုပဲ ။. … အငျးးးးးးးးးး . . . ငွီးသံလေး ထှကျသှားသညျ ။ … . . . “ အငျးးးး ” . . . အငျး . . .အမလေးလေး . . . နှုတျခမျးဖုဖုအဈအဈလေ­းက ပိုဖောငျးလာသလိုပဲ . . .အငျ့ အငျ့ . . . ဆီးခုံဖောငျးဖောငျးကွ­ီးကလညျး မို့ကွှပွီး တကျလာလိုက­ျတာ ဖားဂုနျညငျးကွီးခါးကု­နျးသလိုပဲ ခဈခဈ … ယောနိလေးထဲ အတှငျးသားတှေ ရှစိထိုးနတောမြား … . . . (သောကျကမွငျးမ ညညျးတျောတျောကဲ ) . . . ကိုယျ့ဖာသာကိုယျ စိတျထဲမှာ ရရှေတျရငျး ရှရေငျအစုံကိုလညျး ဆုပျနယျနမေိတယျ ။… တငျးရငျးနတောပဲ နို့အုံကွီးတှကေ ။
ဖငျက ကွှကျသားတှကေို ရှုံ့လိုကျမိရငျး . . . “ အမလေးလေး ” . . . အငျး အငျး အိအိ . . . ( ရှစိထိုးမ ညညျးတျောတျော ရှထနတောပါလား)… တှေးရငျးပွောရငျး ခြှဲကြိကြိ အရညျတှေ ဗှကျခနဲ ဗှကျခနဲ ထှကျကကြုနျသညျ ။ … မအင်ျဂါကွားကနေ ယိုစိမျ့ကလြာတာမြား ဖငျကွားတလြှောကျ စီးအိုငျကုနျတယျ ။ … ဒူးနှဈခြောငျးကို ထော­ငျရငျး သဇငျ အားမရ မတငျးတိမျတော့ ။ … ဒီအခြိနျမှာ သခှားသီး၊ ခရမျးသီး၊ ကွကျဟငျးခါးသီးတှတေငျမက အာကာလှနျးပြံကွီးတခုလ­ုံး ဂှကွားထဲ သှငျးခငျြစိတျတှကေ အငမျးမရ ။ … အပွာ ဇာတျလမျးတှကေ ဆကျဆံပုံတှကေိုလညျး သလေုမွောပါး သတိရစိတျက ယိုဖိတျလို့လာသညျ ။ … . . . “ အငျ့ အ (ကိုကို သဇငျ မရတော့ဘူး အိ အိ လူမလာနိုငျရငျတောငျ ကို့လီးတုတျတုတျကွီးက­ို တယျလီပို့လုပျပွီး ပို့ပေးပါလား) အိ အငျးးးးးးး ” . . . ဂါဝနျကို ထပျဆှဲမသညျ ။… နို့တှနေယျရတာ အားမရလို့ ။… ဂါဝနျက ခြိုငျးရောကျတော့ ခြိုခြိုတငျးတငျးကွီး­တှေ ပွှတျကနေ ထှကျကွလာသညျ။… နှာဘူးစိတျတှနေဲ့ တောငျထနတေဲ့ နို့သီးခေါငျးကို ညှပျပီးခွရေငျး အောကျဖကျမှာလညျး တရစပျနှိုကျသညျ။ … အားရပါးရ အျောပဈခငျြလိုကျတာလည­ျး ထိနျးမနိုငျ သိမျးမရ ။ … ကိုယျအခနျးထဲမှာ တယောကျတညျး အိပျပမေယျ့ ညညျးတယောကျတညျး မဟုတျဘူးမိသားစုနဲ့ နတောဟဲ့ ဆိုတဲ့ စိတျနဲ့ မနညျးသတိပွနျပေးနတောေ­တာငျမှ ငွီးသံတှကေ လြှံလြှံထှကျလာသေးတယျ­ ။
ရငျထဲမှာကော ဖငျထဲမှာပါ တဏှာဓာတျတှေ ပွညျ့တငျးလာလိုကျတာ . . . ဆံပငျတှလေညျးပှ ခေါငျးကနောကျလနျ မကျြခှံကဆငျး လညျတိုငျကကြော့ကြော့ေ­ထာငျ ကုနျးပျေါတငျထားတဲ့ ငါးလို ပါးစပျက ဟစိစိ ။… ပေါငျကားယားကွီးကွား လကျက ထိပျဖူးငေါကျတောကျအစလေ့း­ကို ဖိခွလေိုကျနဲ့ သဇငျတယောကျ ကိုယျလုပျမှကိုယျရတဲ့­ ကာမစညျးစိမျကွီး ခံစားနမေိတော့တယျ ။ကာမလြှပျစဈလှိုငျးကွီ­းက သဇငျ တကိုယျလုံး နှေးကနဲ ရှိနျးကနဲ ဖွတျသနျးသှားသညျ။ တကို­ယျလုံးရှိ အကွောမှနျသမြှ စုလိမျရဈပတျပွီး ဆောငျ့ဆှဲလိုကျ သလိုခံစားရသညျ။ ညှီစို့စို့ အနံ့လေးတခုလညျး နှာခေါငျးထဲမှာ ရနသေလိုလို ။… . . . “ ပူစီလေးကို ခြော့သိပျနတောလား ဆော့နတောလား သိတော့ဝူး ခဈခဈ”…ပွီး။
ဒီနေ့ အိမ်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိလို့ သဇင်တယောက်တည်း လွတ်လပ်နေသည် ။ စာကြည့်စားပွဲက ကွန်ပျူတာမှာ Facebookကို ၀င်ရင်း အကောင့်အတုက သူငယ်ချင်းတွေ တင်ထားတဲ့ ပုံတွေ စာတွေကြောင့် စိတ်တွေ ထကြွလာရပြီး အော စာတွေကို ဖတ်ချင်လာမိတာကြောင့် အရင်က သူငယ်ချင်းတယောက်ကောင်းမှုကြောင့် ရောက်သွားဖူးတဲ့ အတွေးပင်လယ်ပြာ ဖိုရမ်ကို သွားဝင်ဖတ်လိုက်သည် ။ အဲဒီမှာ ——- ဆိုတဲ့ အပြာ ဇာတ်လမ်းတပုဒ်ကို ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်းနဲ့ စိတ်ဝင်စားလာပြီး ဆက်တိုက် ဖတ်လိုက်မိသည် ။ စိတ်ကြွဖွယ်ရာ အရေးအသားတွေကြောင့် သဇင် အိမ်နေရင်း ၀တ်ထားတဲ့ ဂါဝန်အောက်စကို တဖြည်းဖြည်းချင်း မ,တင်လိုက်ရင်း ပေါင်ကြားက ရွှေကြုတ်ကို ပွတ်နေမိသည် ။ လက်ချောင်းတွေကလည်း ရွှေကြုတ်အကွဲကြောင်း တလျောက်ကို ဖိကာဖိကာ ပွတ်နေမိသည် ။ အရည်တွေက အရမ်းကို ရွှဲစိုနေသည် ။ တခါတခါ ဒီစိတ်တွေ ဖြစ်လာရင် မနေတတ် မထိုင်တတ်အောင် ယားလွန်းပြီး ယောက်ျား တယောက်ရဲ့ ကာမဆက်ဆံပေးတာကို အရမ်း လိုချင်မိရသည် ။ … သဇင် နှာဘူးစိတ်တွေထ ရာဂမီးတွေ ဖိစီးပြီး ဖီးလ်တွေတက်နေတာပါကလာ­း ။… ဒီလို တွေးရင်းတွေးရင်းနဲ့ အစေ့လေး တစစ်စစ် ယားလာသည် ။ … အာတွေခြောက်လာပြီး ရင်ဘက်ထဲမှာ ပူကြွကြွနဲ့ ဗလောင်ဆူလာသည်။… နောက်ပြီး တင်းထောင်ထလာတဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးနဲ့ အင်္ကျီသား ပွတ်တိုက်မိတာကို ရွရွလေး ခံစားမိလာသည် ။… ဒါနဲ့ပဲ လက်တဖက်ကို မသိမသာ အောက်လျှောရင်း­ ဆီးစပ်ကို အုပ်ကိုင်ကြည့်လိုက်ေ­တာ့ အားးးး . . . တကိုယ်လုံးအကြောတွေ ဖြန်းဖြန်းထသွားသည် ။
မရတော့ဘူး မရတော့ဘူး . . . အိပ်ယာထက်မှာ အားမလို အားမရနဲ့ ကိုယ်လုံးကြီး တွန့်လိမ်လာသည် ။ … တခုခုကို ဖျစ်ညှစ်ဆုပ်ကိုင်ချင­်လာသလိုလို ပြီးတော့ ပေါင်တံကြီးတွေကို မသိမသာ ထောင်လာပြီး ကားချည် စုချည် ဖြစ်လာသည် ။… တဆက်ထဲ ၀တ်ထားတဲ့ ဂါဝန်အောက်စကို တဖြည်းဖြည်းချင်း မ,တင်လိုက်ရင်း ပေါင်ခြံကြားက ညီမလေးကို လေကောင်းလေသန့်လေး ရှုခွင့်ပေးလိုက်သည်။… နှာစေးတော့မှာ အသေအချာပဲ ခစ်ခစ် ။… အောက်ခံ စက်စပိုင်နာ ချွတ်ချလိုက်သည်မုိ့ အောက်ပိုင်းက ဟောင်းလောင်းကြီး ဖြစ်သွားပြီ ။… ခွေးလှယားသီးပုံပေါ် တက်ထိုင်မိသလိုပဲတော်­့ ဂွကြားထဲမှာ ရွစိယားကျိ တက်နေတာများ ပေါင်းအတွင်းသားတွေတေ­ာင် တဆတ်ဆတ်တုန်တယ် ။ … အယားဖြေမှ ဖြစ်တော့မယ် ။… မဟုတ်ရင် ကာမစိတ်အတက်လွန်လို့ အင်္ဂါဇာတ်ကြားကနေ အသက်ထွက်သွားရင် လူ ကြားမကောင်းလေဘူး ဟယ်။ … လက်ဖမိုးနဲ့ အဖုတ်ကို ခွက်ခွက်လေးအုပ်ကိုင်­လိုက်တော့ ကွက်တိပဲ ။
အကွဲမြှောင်းတင်းတင်း­လေးကို စုန်ချည်ဆန်ချည်လေး ပွတ်ကစားလိုက်ရင်း ရင်ထဲမယ် ဟာတာတာနဲ့ တောင့်တလာပြန်သည် ။… ဒါနဲ့ပဲ လက်ညှိုးထိပ်လေးတွေကို­ ပွင့်လွှာနှစ်ချပ်ကြား­ အတင်းတိုးပြီး ဆင်းခိုင်းလိုက်တော့ အစေ့ဖူးလေးကိ­ု ပွတ်ဆွဲသလို ဖိတိုက်မိသွားတာမို့ မွှေးညှင်းတွေထောင်လြာ­ပီး တကိုယ်လုံး သိမ့်သိမ့်တုန်သွားသလ­ိုပဲ ။. … အင်းးးးးးးးးး . . . ငြီးသံလေး ထွက်သွားသည် ။ … . . . “ အင်းးးး ” . . . အင်း . . .အမလေးလေး . . . နှုတ်ခမ်းဖုဖုအစ်အစ်လေ­းက ပိုဖောင်းလာသလိုပဲ . . .အင့် အင့် . . . ဆီးခုံဖောင်းဖောင်းကြ­ီးကလည်း မို့ကြွပြီး တက်လာလိုက­်တာ ဖားဂုန်ညင်းကြီးခါးကု­န်းသလိုပဲ ခစ်ခစ် … ယောနိလေးထဲ အတွင်းသားတွေ ရွစိထိုးနေတာများ … . . . (သောက်ကမြင်းမ ညည်းတော်တော်ကဲ ) . . . ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် စိတ်ထဲမှာ ရေရွတ်ရင်း ရွှေရင်အစုံကိုလည်း ဆုပ်နယ်နေမိတယ် ။… တင်းရင်းနေတာပဲ နို့အုံကြီးတွေက ။
ဖင်က ကြွက်သားတွေကို ရှုံ့လိုက်မိရင်း . . . “ အမလေးလေး ” . . . အင်း အင်း အိအိ . . . ( ရွစိထိုးမ ညည်းတော်တော် ရွထနေတာပါလား)… တွေးရင်းပြောရင်း ချွဲကျိကျိ အရည်တွေ ဗွက်ခနဲ ဗွက်ခနဲ ထွက်ကျကုန်သည် ။ … မအင်္ဂါကြားကနေ ယိုစိမ့်ကျလာတာများ ဖင်ကြားတလျှောက် စီးအိုင်ကုန်တယ် ။ … ဒူးနှစ်ချောင်းကို ထော­င်ရင်း သဇင် အားမရ မတင်းတိမ်တော့ ။ … ဒီအချိန်မှာ သခွားသီး၊ ခရမ်းသီး၊ ကြက်ဟင်းခါးသီးတွေတင်မက အာကာလွန်းပျံကြီးတခုလ­ုံး ဂွကြားထဲ သွင်းချင်စိတ်တွေက အငမ်းမရ ။ … အပြာ ဇာတ်လမ်းတွေက ဆက်ဆံပုံတွေကိုလည်း သေလုမြောပါး သတိရစိတ်က ယိုဖိတ်လို့လာသည် ။ … . . . “ အင့် အ (ကိုကို သဇင် မရတော့ဘူး အိ အိ လူမလာနိုင်ရင်တောင် ကို့လီးတုတ်တုတ်ကြီးက­ို တယ်လီပို့လုပ်ပြီး ပို့ပေးပါလား) အိ အင်းးးးးးး ” . . . ဂါဝန်ကို ထပ်ဆွဲမသည် ။… နို့တွေနယ်ရတာ အားမရလို့ ။… ဂါဝန်က ချိုင်းရောက်တော့ ချိုချိုတင်းတင်းကြီး­တွေ ပြွတ်ကနေ ထွက်ကြလာသည်။… နှာဘူးစိတ်တွေနဲ့ တောင်ထနေတဲ့ နို့သီးခေါင်းကို ညှပ်ပီးခြေရင်း အောက်ဖက်မှာလည်း တရစပ်နှိုက်သည်။ … အားရပါးရ အော်ပစ်ချင်လိုက်တာလည­်း ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ ။ … ကိုယ်အခန်းထဲမှာ တယောက်တည်း အိပ်ပေမယ့် ညည်းတယောက်တည်း မဟုတ်ဘူးမိသားစုနဲ့ နေတာဟဲ့ ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ မနည်းသတိပြန်ပေးနေတာေ­တာင်မှ ငြီးသံတွေက လျှံလျှံထွက်လာသေးတယ်­ ။
ရင်ထဲမှာကော ဖင်ထဲမှာပါ တဏှာဓာတ်တွေ ပြည့်တင်းလာလိုက်တာ . . . ဆံပင်တွေလည်းပွ ခေါင်းကနောက်လန် မျက်ခွံကဆင်း လည်တိုင်ကကျော့ကျော့ေ­ထာင် ကုန်းပေါ်တင်ထားတဲ့ ငါးလို ပါးစပ်က ဟစိစိ ။… ပေါင်ကားယားကြီးကြား လက်က ထိပ်ဖူးငေါက်တောက်အစေ့လး­ကို ဖိခြေလိုက်နဲ့ သဇင်တယောက် ကိုယ်လုပ်မှကိုယ်ရတဲ့­ ကာမစည်းစိမ်ကြီး ခံစားနေမိတော့တယ် ။ကာမလျှပ်စစ်လှိုင်းကြီ­းက သဇင် တကိုယ်လုံး နွေးကနဲ ရှိန်းကနဲ ဖြတ်သန်းသွားသည်။ တကို­ယ်လုံးရှိ အကြောမှန်သမျှ စုလိမ်ရစ်ပတ်ပြီး ဆောင့်ဆွဲလိုက် သလိုခံစားရသည်။ ညှီစို့စို့ အနံ့လေးတခုလည်း နှာခေါင်းထဲမှာ ရနေသလိုလို ။… . . . “ ပူစီလေးကို ချော့သိပ်နေတာလား ဆော့နေတာလား သိတော့ဝူး ခစ်ခစ်”…ပြီး။